Izitayela Ezihlanu Zedijithali Ezinyakazisa IYurophu | Martech Zone
Izitayela Eziyisihlanu Zedijithali Ezinyakazisa IYurophu
ULwesine, May 23, 2013 Douglas Karr
Idatha enkulu, iziteshi eziningi, imidiya yezokuxhumana kanye nenhlalo yomphakathi konke kunomthelela ekuziphatheni kokuthenga online. Ngenkathi le infographic igxile eYurophu, i- umhlaba wonke kahlukile kakhulu. Idatha enkulu isiza abahlinzeki be-ecommerce ukubikezela indlela yokuziphatha yokuthenga nokusiza ukwethula ukunikezwa kwemikhiqizo kuziteshi zonke - ukukhuphula amazinga wokuguqulwa kanye nabathengi abathengisayo.
Ukukhanya okubonakalayo kwe-McKinsey iConsumer Izindlela ezi-5 ezisemqoka zokusetshenziswa kwedijithali kwe-e-commerce, iselula, imigudu eminingi yokuxhumana, imithombo yezokuxhumana kanye nedatha enkulu.
Ingxenye enzima, vele, akuyona nje ukuthi izinkampani ziyisebenzisa kanjani idatha enkulu nokuthi zithengisa kanjani eziteshini, kubalwa umthelela wesiteshi ngasinye sokumaketha ekuthengeni konke. Izinkampani ezinkulu zisebenzisa ukubikezela analytics eqoqa amanani emininingwane futhi ibavumele ukuthi baqonde ukuthi yikuphi ukwanda noma ukwehla komsebenzi wesiteshi esisodwa ozoba nakho kuwo wonke ama-spectrum. Izinkampani ezincane zisasele nezindlela zokuthinta okokuqala, okokugcina okuthinta okungenzeka kunganikeli ukuqonda nokunemba kwezindlela izindlela zokuziphatha zabathengi eziyinkimbinkimbi manje ezizithathayo.
Tags: idatha enkuluukusetshenziswa kwedijithaliI-europeMcKinseyMcKinsey & Companycommerce mobileiziteshi eziningiukumaketha kweziteshi eziningiezentengiso yenhlalo
Ukuthinta kokuqala, ukuthinta kokugcina, ukuthinta okuningi
UJun 2, 2013 ngo-8: 38 AM
I-inforgraphic yinhle kakhulu, ngiyavuma ngokuphelele ukuthi ngokutshala imali eningi kuhlelo lokuthenga online nokufaka imininingwane eminingi kumawebhusayithi, amakhasimende nokuthengisa kuzokhula kakhulu